Xusuus-qoryo fadeexad leh oo ka socota Xaakinka Dhageysiga Labaad ee Dacwada Shilka Ankara YHT RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraXusuus-qoryo fadeexad leh oo ka socota Garsooraha Dhageysiga Labaad ee Dacwada Shilka Ankara YHT
24 / 01 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
maxkamad shil ankara yht, maxkamad labaad
Dhageysiga labaad ee dacwadda, oo ka dhacay magaalada Ankara bishii Diseembar 2018 shil tareen xawaare sare leh, oo saddex ka mid ah ay ahaayeen farsamayaqaanno, ayaa ku dhintay guriga maxkamadda Ankara. Madaxa maxkamadda ayaa u sheegay dhibbanaha inuu ka baqay inuu tareenka raaco shilka kadib, halkaas oo dadkii ku dhaawacmay shilkaas ka badbaadeen.
Sida uu sheegayo warkii Serkan Talan ee ka soo baxa WargeysyadaDhageysiga labaad ee dacwadda ayaa ka furmay 13 eedeysane magaalada Ankara bishii Diseembar 2018, 10 oo ku saabsan shilka tareenka xawaare sare ku dhacay oo ay sagaal qof ku dhinteen dhowr iyo tobanna ay ku dhaawacmeen oo ka bilaabmay 30-ka Assize Court ee Ankara.
10 eedeysane ayaa la dhageystay dhageysigii ugu horreeyay ee kiiska la xiriira shilka dhacay shil ka dhacay isku dhacyada u dhexeeya Wadada Xawaaraha Sare (YHT), kaasoo ku safrayay inta u dhaxeysa Ankara iyo Konya, iyo tareenka hagaya ee xakameynaya biraha. Dhageysiga labaad wuxuu sii socon doonaa bayaanka iyo ehelka iyo dadka ku dhaawacmay shilkaas.
LABA DHAQAN DIIWAAN GELIN OO LAGU AQOONAYO
Dhageysiga koowaad ee dacwadda ka dhanka ah shilka ayaa dhacay 13kii Janaayo. Dhageysiga koowaad, wuxuu go’aansaday inuu siidaayo sarkaalka mooshinka ah Sinan Yavuz iyo kontoroolka taraafikada Emin Ercan Erbey, oo in kabadan hal sano xabsi lagu hayey, iyo inuu sii wado xariga sarkaalkii taraafikada Cusmaan Yıldırım.
HKP SHAQAALAHA DIIWAAN GELINTA DHULKA YILDIRIM
Hakan Çavdar, oo ka badbaaday shilka, ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee marag kaca. Isagoo sheegay inuu ka cabanayo dhamaan masuuliyiintaas, ayuu Çavdar yidhi, "Waxaan u shaqeynaayay Konya inta ay wax dhacayeen. Waxaan guriga joogay laba bilood oo aan la dafiri karin. ”
Qareenka Xisbiga Dadka Xorta ah Doğan Erkan wuxuu sheegay inay rabaan inay kaqeybgalaan kiiska xubin xubin ka ah TCDD. "Waxaan ku tiirsan yihiin dun cudbi ah ee Turkey," ayuu yiri Erkan, "Waxaan ahaa musharax baarlamaanka ee magaalada this. Magaaladan waxaa xukuma kirada. Aynu maamulno sayniska halkii aan kiraysan lahayn. Cahit Turan wuxuu ka cawday kuwa helay Binali Yıldırım, Lütfi Elvan iyo signalada qandaraaska, oo ay hoos ugu dhacday Wasaaradda Gaadiidka illaa iyo 2016 ”.
Adem Şahin Çetin, oo ka mid ah badbaadayaasha shilkaasi ku dhaawacmay, oo yidhi "Meel cidla ah kama tagin", ayaa yidhi, "cilmu-nafiskaygu wuu jabay. Waxaan sidoo kale ka dacwoonayaa eedaysanayaasha iyo kuwa aan difaacayn. Mid kale oo dhaawac ah oo loo yaqaan Ahmet Elmas wuxuu yidhi, “jilib baan ka dhaawacmay. Waxaa laygu daaweeyay isbitaalka. Waxaan qabtaa shaqooyin dhisme ah oo aan shaqeyn kari waayey 40 maalmood. Waxaan ka cawdaa eedaysanayaasha. ” Aydın Can Akdur, oo ah badbaadin kale oo badbaaday, ayaa yiri, "Ma jiraan wax badan oo aan sheego. Waxaan ka cabanayaa dhamaan eedaysanayaashu inay helaan cadaalad. ”
XARUNTA KA SOO SAARID SHAQAALAHA KA SOCDA GARSOORKA: HORRIBLE MA AHA FARSAMO
Burcu Borulday, oo isagu ah shaqaale caafimaad oo dhaawacmay, ayaa yidhi, "Waxaan ka dacwoonayaa qofka ugu awoodda badan maadaama nidaamkan oo kale la furay ka hor intaan si buuxda loo aasaasin. Waxaan helay daweyn cilmi nafsi ah qiyaastii hal sano oo keligay ma seexan karo. Ma aqaan haddii aad qaadan doonto tareenka xawaaraha sare ka dib dhegeysiga ugu dambeeya, laakiin ma doonayo. ”
Gudoomiyaha maxkamada ayaa yidhi, "Looma baahna in laga walaaco sidaas. Saaxiibkeen garsooraha ah ayaa aada Konya oo taga. Borulday oo dhaawacmay ayaa yiri kadib hadaladan, "Waxaan ku dhahay waxaan u qaadan maayo tareenka xawaaraha sare qof walba oo aan arko."
Ayşe Nevin Sert, oo ka mid ah dadkii badbaaday ee badbaaday oo sheegtay inay wali saaran tahay tareenka sababa la xiriira shaqadeeda, ayaa tiri, “Aad ayaan u niyad jabsanaa markii aan maqlay dhageysiga koowaad. Wixii halkan ka hadlay ayaa iga baqay xitaa waxbadan oo tareenka ka mid ah. Waxaan ka cabanaa qof walba. ”
"Waxaa jirtay maahmaah cabsi ah inaysan dhaqso u isticmaalin," ayuu yiri madaxweynaha maxkamadda.
Fevzi Karayel, oo feedhkiisa uu ka jabay shilka oo uu ku jiray xannaanada degdegga ah muddo toddobaad ah, ayaa yidhi: İsa Apaydın Waxaan ka cabanaa qofkasta, gaar ahaan. Maareeyihii hore ee TCDD hore oo yiri waxaan uga tagnay sanad aad u wanaagsan İsa ApaydınWaxaan si gaar ah uga dacwoonayaa.
Gizem Nida Çınar, oo ka badbaaday shilka oo sheegtay in ay heshay daaweyn nafsi ah, ayaa tidhi, “Waxaan wali isticmaalaa daroogo. Waxaan ahay qof cabanaya. ” Ereyadan ka dib, madaxweynaha maxkamadda ayaa yidhi, "Ma isticmaalo dawooyinkaas." Erahan, Çınar, oo ka badbaaday shilka dhaawacmay, ayaa ku jawaabay, "Ma fiicani karo la'aan dawooyinkan."
Esma Yilmaz oo ah hooyada Kubra Yilmaz, oo shilka ku dhimatay ayaa tiri: "Waxaan ka dacwoonayaa kuwa gabadhayda iga qaaday." Furaha Kübra Yılmaz ee Turhan Sapancı ayaa yiri, waxaan qabnay xanuun weyn. Intii aan ku guda jiray dhisida guri farxad leh, noloshaydu waxay noqotay mid si dhakhso leh u go'doonsan markaan ku riyoonayay inaan jeclaado wiilka. Waxaan ka cawdaa kuwa masuulka ka ah, ayuu yidhi.
Cusmaan Yıldırım, oo wali lagu hayo kiiska shilalka xawaaraha dheereeya, waa toddobada kale ee eedeysane oo aan wax dambi ah laheyn, sidoo kale Emin Ercan Erbey iyo Sinan Yavuz, oo la sii daayay kiiska hore:
Kadir Topbas kama soo qeyb gashay dhageysiga kiiska Metrobus mar labaad
Diidmada Topbaş oo ka qaybqaadatay taageerayaasha CHP taageerayaasha Metrobus
Xaaladda iibsashada Metrobus 4. lagu arkay maxkamad
shil tareenka xawaare sare leh
Cabsidu si deg deg ah waxtar kuma leh